घटना घटेको २ दिन नहुँदै खुल्यो मुनालाई विजय चौधरी ह’त्या गर्नुको कारण ! – हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > अपराध > घटना घटेको २ दिन नहुँदै खुल्यो मुनालाई विजय चौधरी ह’त्या गर्नुको कारण ! – हेर्नुहाेस्
admin February 12, 2020 अपराध, समाचार, समाज	0
माघ २९, काठमाण्डाैं । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको श्रीमती मुना कार्कीको ह””त्या गरेर देहत्याग गरेको भनिएका विजय चौधरी दाङ लमहीका हुन् । विजयको गाउँमा स’न्नाटा छ, छोराको श’व बुझ्न ५० वर्षीय बाबु मंगलबार बिहानै काठमाडौं हिँडेका छन् भने ४५ वर्षीया बिरामी आमालाई घटनाबारे जानकारी नै छैन । पूर्वसचिव कार्की दाङको लमहीस्थित प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाको कार्यालय प्रमुख भएकाले विजय काठमाडौं आउने संयोग जुरेको हो ।
कार्कीले पहिले लमहीका आसिवन चौधरीलाई घरेलु कामदार बनाएर काठमाडौं ल्याएका थिए । ६ वर्षअघि कार्की नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख बनेको वेला आसिवनलाई प्राधिकरणको लमहीस्थित शाखामा जागिर लगाइदिए  । आसिवनले पनि गुन तिर्न विजय चौधरीलाई कार्कीको घरमा घरेलु कामदार बनाइदिएका हुन् ।
चौधरी परिवारका अनुसार विजय अघिल्लो वर्ष तिहार यता घर आएका थिएनन् । तर, बाबुआमासँग फोनमा कुराकानी भइरहन्थ्यो । साता दिनअघि मात्रै उनले बुबा जानकीलाई फोन गरेर कार्की परिवारका लागि तोरीको तेल र मसुरोको दाल पठाइदिन भनेका थिए । ‘उसले काम गर्ने घरको लागि तोरीको पाँच लिटर तेल र पाँच किलो मसुरोको दाल पठाइदिन भनेको थियो,’ जानकीले भने, ‘छोरासँगको अन्तिम कुराकानी नै त्यही थियो ।’ कार्की सरले ड्राइभिङ लाइसेन्स निकालिदिन लागेको खबर पनि त्यतिवेला छोराले सुनाएको जानकीले बताए ।
विजयले ह’त्या गरेर देहत्या’ग गरेको पत्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको आफन्त र छिमेकीहरू बताउँछन् । बोल्नसमेत लजाउने विजयले यत्रो अ”’पराध गरेको भनेर पत्याउन नसकेको ठूलीआमा अनारकली चौधरीले बताइन् । ‘कहिल्यै झ”गडा गरेको थाहा पाइएन । ऊ त धेरै बोल्दा पनि बोल्दैनथ्यो,’ अनारकलीले भनिन् ‘यत्रो घटना गरायो भनेर कसरी पत्याउनू ? तर प्रमाण जे बोल्छ, हामीले मान्नै पर्‍यो’
लमही–२ का वडासचिवसमेत रहेका स्थानीय रामभजन चौधरीले पनि गाउँमा छँदा विजय शान्त स्वभावको भएको बताए । ‘म पनि छिमेकी नै हुँ। उसले कहिल्यै झ”गडा गरेको थाहा पाइएन । तर, त्यति ठूलो घटना गरायो भन्ने सुन्दा पत्याउन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने । विजयका २० र १८ वर्षका दुई भाइ छन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामा र भूपेन्द्र ओलीले लेखेको समाचार ।
केरलाबाट उद्दार गरिएका २ छोरीहरूकाे खुशी ल्याउन सन्तोषले यस्तो सम्म गरे (भिडियो हेर्नुहाेस्)
बाहिर निस्कदै हुनुुहुन्छ? कडा कारवाहीमा पर्नुहाेला, यस्तो छ आजबाट गृह मन्त्रालयकाे सूचना, हेर्नुस्
नेपाली कांग्रेसका ७६ वर्षिय नेताले ६ वर्षिय बालिकालाई बला’त्कार गरेको आरोप लागेपछि…